China Spin Photo1.67 Photochromic Grey MR-7 Single Vision Lensa AR Coating sy mpanamboatra | Kingway
CR39 1.499 White solomaso fahitana optika UC
1,67 MR-7 mason-tsivana avo lenta HMC AR Optical lens
1.56 Aspherical Cr39 Iray Fahitana Lensa AR Coating ...
Semi nahavita 1.56 Cr39 Photochromic Gr ...
Photochromic Grey 1.56 Cr39 morontsiraka fohy mandroso ...
UV420 famokarana 1.56 Fahazavana notapahina manga voasakana optika ...
Spin Photo1.67 Photochromic Grey MR-7 Single Vision Lensa AR Coating
Model Model: 1.67
Vokatry ny fahitana: Fahitana tokana
Anaran'ny marika: kingway
Taratasy fanamarihana: CE / ISO
Fitaovana fitaratra: MR-7
Fitaovana: HC, HMC, SHMC
Fivarotana fivarotana tsiroaroa
Single haben'ny fonosana 50X45X45 cm
Lanjany tokana 22kgs eo ho eo
Karazana fonosana kitapo anatiny, baoritra ivelany, fenitra fanondranana na amin'ny volavolanao
Fe-potoana Quantity (Pairs) 1 - 3000prs, 15 andro
Quantity (Pairs)> 3000prs, Hatao fifampiraharahana
1:61 MR-7 Gray 65 / 70mm
Abbe Gravity manokana Transmission Coating
33 1,34 0,97 Famonoana HC, HMC / AR
1. Ny lanjan'ny maivana sy ny hateviny manify, hatramin'ny 50% manify ary 35% maivana noho ny solomaso hafa
2. Ao amin'ny elanelam-potoana miampy, ny solomaso aspherical dia hatramin'ny 20% maivana sy mahia noho ny spherical lens
3. Famolavolana endrika asherika ho an'ny kalitaon'ny fahitana miavaka
4. Fihoarana eo anoloana eo anoloana noho ny lantina tsy misy aspera na tsy atorika
5. Ny maso tsy dia lehibe kokoa noho ny solomaso nentin-drazana
6. Fanoherana avo lenta (mety be amin'ny spaoro sy ny masinin-jaza)
7. Fiarovana tanteraka amin'ny taratra UV
Ny solomaso solomaso Aspheric dia mamela ny mason'ny crisper noho ny lens an-tsary mahazatra, ny ankamaroany rehefa mijery lalana hafa noho ny foibe optique optika.
Tsy misy ifandraisany amin'ny kalitaon'ny optika, mety manome masomaso manify izy ireo, ary koa manodinkodina ny mason'ny mpijery tsy dia fahita amin'ny olon-kafa, ka mamokatra endrika hatsarana tsara kokoa.
1. hafainganam-pandeha haingana amin'ny fanovana, avy amin'ny fotsy mankany amin'ny maizina ary ny mifamadika amin'izany.
2. Mazava tsara ao an-trano sy amin'ny alina, mampifanaraka ho azy ny toe-java-misy.
3. Loko tena lalina aorian'ny fanovana, ny loko lalina dia mety hatramin'ny 75 ~ 85%.
4. Tsy fitoviana loko tsara alohan'ny sy aorian'ny fanovana.
--HC (fonosana mafy): Mba hiarovana ny lantina tsy miakanjo amin'ny fanoherana ny rangotra
--HMC (sarisary mafy / mifono AR maro): Mba hiarovana ny solomaso amin'ny fomba mahomby amin'ny fisaintsainana, manatsara ny fahaiza-miasa sy ny fiantrana amin'ny fahitanao
--SHMC (super hydrophobic coating): Atao tsy tantera-drano, antistatika, anti slip ary fanoherana ny solika ny solomaso.
---- Ny haitao UV + 400cut dia manala tsy ny UVA sy UVB ihany, fa ny hazavana hita maso ihany koa (hazavana HEV) 400nm-420nm.
--- Ny fikarohana farany natao dia naneho fa ny fanakanana ny jiro UV sy HEV dia zava-dehibe amin'ny fiarovana ny maso amin'ny katarakta sy ny fihenan'ny macular (AMD).
--- Mbola iharan'ny 60% ny taratra Ultraviolet isika amin'ny andro rahona ary 20% -30% amin'ny andro orana. Ny solomaso voatapaka manga Oue dia afaka manome fiarovana amin'ny toetr'andro rehetra.
Previous: Spin Photo1.61 Photochromic Grey cr39 Fitaovana fahitana tokana AR Fandokoana ar
Manaraka: White 1.56 maimaimpoana maimaimpoana 9 + 4mm lalantsara optika lalantsara fohy kokoa
1,67 Mr7 Lensa fanapahana manga
1,67 Mr7 Lensa optika
1.67 Mr7 Photogray Lensa optika
Flat Top 1,56 Photochromic Gray Cr39 eyeglass L ...
Photochromic Grey 1.56 Cr39 fohy mandroso c ...
1.56 Photochromic Grey Single Vision Lensa AR ...